SET caadiga ah | Apg29
SET ku salaysan yahay encryption, shahaadooyinka digital iyo saxiixyada digital (u dhiganta oo saxiix at card si joogto ah gadashada).
SET u baahan tahay qaar ka mid ah software rakibay in kombiyuutarada. Marka wax iibsadaa ay dambiisha shopping digital buuxiyey oo dooro "mushahar la kaararka deynta" qaadataa isgaarsiinta kala duwan. Certificates waxaa dib u soo diray, a amar mushaar digital dual waxaa abuuray iyo siiyey ku haynta bangiga la sameeyo. Waayo, waxaa furayaasha sirta ka kici dukaanada waaweyn, si ay jirto wax-u muhiim ah xidid u ah dhammaan dadka isticmaala a iyo waxaa lagu dhisay software ah.
SET waa mashruuc iyo heerka caalami ah si ay si ammaan ah ku bixiso kaararka credit on internetka. Waxaa inta badan ku saabsan tahay ganacsi elektarooniga ah iyo bixinta biilasha. Mashruucan ayaa waxaa bilaabay in 90s bartamihii. gaabinta u taagan tahay Bixid Electronic Secure oo Swedish waa macaamilka electronic ammaan. Behind abuurka heerka ahaayeen shirkadaha waawayn ee sida Visa, MasterCard, IBM, Microsoft iyo Netscape. Markii ay ahayd mashruuc tijaabo ah oo ka qayb ka Sweden bangiyada waaweyn qaar ka mid ah iyo boostada Daymaynta.
SET ku salaysan yahay encryption, shahaadooyinka digital iyo saxiixyada digital (u dhiganta oo saxiix at card si joogto ah gadashada). Data Technical abuuray a ee loo yaqaan dalwaddii ( "macmal") kaararka ay ka mid yihiin isticmaalka shahaado digital iyo lambar credit card Windows XP loo soo diray. Waa bangiyada iyo shirkad Verisign kuwaas oo la xakameeyo iyo shahaadooyinka arrinta labada isticmaala kaarka iyo ganacsiyada. Verisign waa qandaraas ah in ay show ku. Merchant shahaadooyin kala duwan la barbar dhigi karaa stamp bixinta waxaa la soo dhaafay loo isticmaalaa marka laga jaro a iibsan credit card.
Internetka Cash ayaa ka caawiyay horumarinta SET iyo sidoo kale waxa uu leeyahay nidaam la mid ah u yeedhay kabashooyin. SET iyo CyberCash isticmaalaa nooca la mid ah sirta. Verifone waa shirkado kale oo deriska la isticmaalayo Heerka SET ah, iyo in ay ahayd markii la tijaabiyey. Iyada oo nidaamka SET oo la mid ah, oo aad lacag ku wareejin karaa inta u dhaxaysa shakhsiyaadka, sida dalalka isku day si looga hortago in lacagta la dhaqay iyo sida. Sida listicmaalka wax badan oo kale ka dibna ay isticmaalaan SET in aan si lacag yar, sababtoo ah kharashka maamulka sare.
Computers iyo shirkadaha computer - dunida electronic-dhabarta maaliyadda
Waxay ahayd ee '50s sida bangiyada si tartiib tartiib ah waxay bilaabeen in ay isticmaalaan kombiyuutarada iyo technology isgaarsiinta in howlgaladooda. Qaar ka mid ah fikirka xataa wakhtigaas on nidaamka listicmaalka ah ku faafay guud ahaan Maraykanka in lagu lala lahaa in aan aqoonsi ah. Waxay u yeedhay nidaamka mustaqbalka suurto galka ah ee EFTS (Funds Electronic Bedelka System). Laakiin waxay ahayd inta lagu guda jiro '60s sidii horumar la xiriira kombiyuutarrada si fiican u bilowday. Waxay ahayd bangiga dhexe maamulayaasha vurmade ugu adag for computerization in this wareega hore. Mid ka mid ahaa John Reed at Citybank (Gudoomiyaha dambe ee guddiga waxaa) kaasoo sameeyey laanta dhan noqday iswada.
xamaasad Tani computerization ka mid ah maamulayaasha dhexe ahaayeen ma aha oo kaliya in Maraykanka. Xataa Spain, iyaga shaqeeyay wax loo yaqaan COAS (Guddiga Hawlaha iyo is). Mid ka mid ah imtixaanada aad u horeeya ee dalka Mareykanka ee lacagaha dagdag ah lala nooc ka mid ah kaarka aqoonsiga waxaa laga dhigay in 1967 ee Wilmington hogaaminayo Bank of Delaware. Waxay ahayd IBM asal abuurtay magnetremsetekniken hadal ayaa lagu tilmaamay "hadiyad ka timid dunida IT si dunida ka mid ah bangiyada."
In Sweden Savings HORUMARINTA keentay Sven G Svensson doodaha hore shakhsi ahaaneed ee computerization oo ka mid ah bangiyada kaydka. Goor hore qarnigii 50aad waxaa lagu qabtay shir sanadlaha ah ee la xiriira Saltsjöbaden xisaabtaaysa computerization. 90s ahaa toban sano marka Internet dunida ganacsiga galay. Shirkadaha badanaa bilaabay hawlo kale laakiin ugu dambeyntii noqday shirkad weyn oo computer. Kuwan waxaa ka dibna inta badan darsadeen kooxda shirkadaha weyn.
Burroughs ahaa shirkadda computer badan oo noocan oo kale ah, iyada oo xoogga on dunida bangiyada. Burroughs dhisay ay ka mid yihiin deg deg ah. Tani waa habka caalamiga ah ee xiriirka ka dhexeeya bangiyada. A shirkado madax-bannaan hore waaweyn ahaayeen Sperry. Burroughs agaasimaha Michael Blumenthal, guulaysteen 1986 inay la midowdo Burroughs iyo Sperry in Unisys. Blumenthal ayaa sidoo kale hore Wasiirka Maaliyadda ee.
Shirkadaha kale oo muhiim ah taariikhiga ah ee this macnaha, Remington Rand. ganacsi Unisys ayaa ka koobnaa, baniadamka ah in in ay sii wadaan shaqada dheereeya iyo in ay is ogow of nidaamka weyn ee weelasha RFID-tagged for wakiil military ee. RFID waa technology ah oo gudbiya tiro yar oo macluumaad la isticmaalayo hirar radio. Sida aan ku arki doono, by inta kale ee buugga waa in la eego RFID xiriir badan oo si listicmaalka ah. nidaamka ka hawlgala Microsoft ayaa waxaa loo isticmaalaa in ATM ayaa durba la soo sheegnay. Nidaamka Linux ayaa ka hawlgala ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in kuwan, inta badan server Internet iyo nidaamyada computer weyn oo lagu supercomputers.
Tusaale kale shirkadda, Finland iyo Sweden shirkadda IT firfircoon Tieto waxyaabo kale syssIar by saarista kaarka deynta at bangiyada kala duwan ka mid ah. Facebook ayaa galay warshadaha bixinta si dhab ah. Shirkadda bilaabay dalwaddii (artificial muuqata ama xataa) lacagta ee 2011 iyo shirkadaha ciyaarta computer
Hung markiiba. Facebook ayaa sidoo kale la qorsheeyay in ay 500 million users awoodi doonaan in ay bixiso kaarka deynta via chatappen Rasuulka. Isticmaalka hab software chat in "la hadal qoraal ah." Waxaa soo diro weedho u dhaxeeya si tartiib tartiib ah (eeg hadal telefoonka), ka duwan e-mail iyo boostada caadiga ah.
Facebook ayaa sidoo kale qalab lagu khaa'imiintan, sida abuurista dhinaca ICA -like a kaas oo mararka qaarkood dadka kun oo karoon dhacay by faa'iidada eedeeyay in tartan. Taas waxaa la samayn karaan ururinta xogta on sanduuqyada bangiga. Shirkadda Apple wuxuu dhisay database weyn xogta credit card loogu talagalay macaamiisha qaba kaarka. Shirkadaha computer ayaa raba listicmaalka ah qeyb ahaan waa maxaa yeelay waxa ay ugu dambaysta la xiran yahay waxyaabaha ay. listicmaalka The more kombiyuutarada dheeraad ah.
Sida akhristaha u badan tahay in sarcaadka afka dartiis, ma jirto 20-sano jir ah kuwaas oo ku qoray kitaabkan. Ayaa la soo shaqeeyay kombiyuutarada qaab ama mid kale oo dhowr sano. Sidee baan ahay, waxaan ma uu doonaynin, si kastaba ha ahaatee, Xusuuso sababo asturnaanta. A iaktagelse shakhsi ahaan lama filaan ah. Waxay qaadan lahaa uu nool yahay, oo qorniinkii uu qoray ku dhowaad kalabar kitaabkan ka hor inta aan iman lahaa guud ahaan falcelin xun hal dhinaca listicmaalka ka dhanka warshadaha computer ee. Laakiin waa wax dhacay, ku dhowaad 50 sano ka hor. dunida computer Maanta uma muuqato in ay ka yeesheen kaskooda iyo arkay sida xun listicmaalka ah.
marka laga reebo waxa uu ku saabsan nin la odhan jiray Paul Armer ka Corporation rand ah, oo hore u soo daahay 60 ee arrimaha u gaarka ah-profile sare agagaarka lacagta listicmaalka. Waxa uu ka hadlay of this ee Senate Mareykanka. maanta waxaan u baahan tahay nin sida badan iyo haweenka adduunka kombiyuutarka. Waxaa jira dad bangiga hore dabcan muhiim ah. Laakiinse meeh dhaleeceyn ka dunida computer ah? Armer sheegay in aan xitaa magaca diiwaanka saar sameeya in ilaa xad aqoonsan kartaa shakhsiyaadka.
In uu shaqada loo baahan yahay Armer waqti, xogta ku saabsan mushahar in industry kombiyuutarka. Tani ma aha markii uu ka dhigay ganacsi on kaararka tasoo in xogta lagu kaydiyo waxa uu marka hore hab qarsoodi ah u maleeyay. Xogta ka koobnayd oo keliya mushahar, waxbarashada iyo qeybsataan guud juqraafi saddex meelaha. Marka Paul Armer markaas soocaa alaabta si, uu si deg deg ah (kaas oo aan loogu talo galay tan iyo bilowgii) yaabaa eega kii waxay ahayd abbaaraha oo haystay mushaarka ugu badan. Tani waxa ay ahayd bilowgii uu go'an tahay in ay wada hadal ah ee u gaarka ah oo ay kasoo horjeeddo daacadnimada mustaqbalka ee hoos u dhaca dhaqaalaha sida lacagaha la eego listicmaalka ah.
Waxaa laga yaabaa in xidhiidh ugu muhiimsan ee u dhexeeya kontantlöshet iyo kombiyuutarada waa in ay yihiin listicmaalka ee loo yaqaan e-lacag, marka laga reebo in lagu kaydiyaa on kaararka prepaid waxaa sidoo kale lagu kaydiyaa on server computer oo ah qaab-ka loo yaqaan lacagta network. Haddii aad u aragto kombiyuutarada sida cabsan, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in halkii ay noqon doonto ammaan si ay u joojiyaan wareegga ah ee qafis hamster ah.
Waayo, kuwa kaliya ee ay leeyihiin xiiso gaar ah in kombiyuutarada, Anigu ma ku talinaynaa in la iibsado kombiyuutar. Ha iibsan computer ah oo kaliya sababtoo ah waxaa laga yaabaa in mararka qaar wanaagsan in ay leeyihiin. Waxaad ku noolaan karaa iyada oo aan. Waa mabda'a isku mid aanay u iibsato baabuur la dhawaad ​​kaliya taagan garaashka. Maxaa yeelay, shirkadaha computer iyo aad u badan ku adkaysanayaan in la isku dayayaan in ay sammeeyo on noo kontantlöshet iyo Big Brother si aanay iibin doonaa sida kombiyuutarada badan ee ay rabaan. Sidoo kale waa wax aad u faa'iido badan oo xiiso leh inay sameeyaan kombiyuutarka. Sababta A weyn sababta aan weli u qaban on kombiyuutarada waa in ay qoraan buugaagta. Kombiyuutarka waa heer sare ah sida maktabadaha, teeb iyo toy nadiif ah.
Laakiin waxaan noqon doonaa daacad ah, ii xiisaha kombiyuutarada dhintay wax yar kasta iyo mar kasta oo aan u kitaabkan ku qoran. Hal sheey aan qaarkood. Haddii wadarta listicmaalka ah inoogu dhacday, waxaa jira wax ka mid ah oo kaliya in ay ku taliyaan. Total iyo guud bandowgu technology. Ma aha nooca wax in uu leeyahay inuu hushållsabetet in la sameeyo, laakiin wax kasta oo kale in uu leeyahay shaqo ah ee isgaadhsiinta iyo wargelin. Waa talo daacad ah ka qoraa kuwaas oo run ahaantii jeclahay technology. In aragtida, bandowgu dishaan a technology qayb ku filan oo waaweyn kontantlösheten. Ma jiri karo oo aan technology. Cash maamuli kartaa koronto la'aan iyo technology (marka laga reebo marka la eego soo saarta). Waxay sidaa samaysay dhowr qarniyo.
Inkasta oo aan doonayaa inaan sii wado in la isticmaalo computer si taasi micnaheedu ma aha in dhowr jeer ayaan fantasized ku saabsan fikradda ah in si fudud aakhirka la kombiyuutarada. Yaabay waxa nolosha noqon lahaa iyo ficil la'aan. Kormeerayaasha bulshada iyo gacanta ku muwaadiniinta iyo aad u badan by kombiyuutarada. Waxaa muuqataa in ay innaba dhammaad ma murugo noqon. Sidaas si kastaba, waxaad ka heli kartaa wax yar ka badan dhibka yar, iyo sida had iyo fikirka ku saabsan wixii aad samayn on your computer.
Marka listicmaalka ayaa si buuxda u muujin doonaa in ay fool xun wajiga, laga yaabee waxaan jeclaan doonaa waxaan lahaa kubada cagta ciyaaray qorshe si buuxda u halis ah in meel u leedahay in kombiyuutarada sida mid ka mid ah danaha aan. Waxaa laga yaabaa in ay ahayd in nooc ka mid ah dhaq-yahaniinta ah in meel in uu jebiyey kombiyuutarada guriga iyo kumbiyuutarada hore biibiile bir ah. Istaagay ka baxsan xarumaha computer mainframe la Calaamadaha in akhri "Dhimashada in computer ah!". Laakiin markaas Dhanka kale, malaha ma kitaabkan u yimid inuu noqon.
Waxaa laga yaabaa in kuwa i arki sida a reactionaries farsamo. Taasi ma aha kiiska oo dhan. Maxaa lahaa waxaan ugu eg yahay nin la go ku boodi doonaa god listicmaalka dhoobo. Si arrintan loo sameeyo, waa in mid ka mid hore xoogaa tallaabooyin ah dib ugu. Tan iyo technology in si buuxda loo isticmaali karo wax wanaagsan mar kale. Ugu dambeyntii, waxaa si fudud u soo gunaanadi karo, in aan la alifay ee computer lahaa ma listicmaalka waa in ay qaab casri ah oo sax ah.
Waxaan nahay macaamiisha, kuwaas oo bixiyo lacagta
Sidee ayuu yiri Guddoomiyaha Lars Nyberg xigeenka macno at muxaadaro on Midowga Sector Financial Congress ee Balsta 2008.
"Waa sahlan ugu maleeyeen in marka hore in ay aaminsan yihiin in ay jirto ganacsiga iyo bangiyada kuwaas oo lacag si raxmad leh lacag ah. Laakiin ma aha in Ganacsatada fudud. Baahan yahay in ay kharashka qarisay, haddii kale ma ay qaban karaan ganacsigooda. Oo isla kaas dhaco, waayo, bangiyada. Sidaa darteed, boodaya qiimaha lacagta ugu danbeyn ilaa sumaddii on the badeecadaha iyo adeegyada aannu iibsan. caanaha iyo khudaarta xoogaa ka qaalisan qiimaha dukaanka iyo deposit xoogaa hoos u bangiga badan haddii kale noqon lahaa kiiska waxaa laga yaabaa. sidaas darteed waxaa macaamiisha iyo macaamiisha bangiga ee ugu dambeyntii bixiso kharashka lacagta Laakiin ma waxaan iyaga ka aragtid Sidaa darteed, waxa aan u horseeday inay aaminsan yihiin in ay yihiin -... ama qof kale in uu bixiyo "
Sidaa darteed wuxuu yidhi, qof gudahood Riksbanken ah, waayo, mar, runta qaawan. Waxaa jira macaamiisha iyo macaamiisha, kuwaas oo bixiyo lacagta. War haatan aynu ka fogaadaan qaylinayaan ku saabsan sida lacagta naqdiga badan lagu eedeeyay in ay ganacsiga iyo bangiyada. The bangiyada oo, kadis ah, celcelis ahaan u helaan dhowr boqol oo doolar in faa'iido saafi ah sannad kasta Swedish. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la hadli kartaa ee ku saabsan "Ganacsiga saboolka ah" marka ma geyn karo takings maalin ay bangiga. Bangiga qaranka ayaa doonaya in dadka si ay u isticmaalaan kaararka deynta ka badan inay ka sameeyaan sida khaldan sheegtay dheeraad ah "dhaqaale fiicnayn". Nyberg ayaa sidoo kale doonayay fahamsan yahay, laakiin iska sameeyey si buuxda runta u sheegay.
At muxaadaro bartamihii 90 marka Stefan Ingves ahaa hadal guddoomiye ku-xigeenka, waxa uu soo socota.
"Waayo, bangiyada, iyo sidoo kale warbaahinta ee kala duwan, qabashada qoraalada iyo Shilimaad iyadoo ay sabab u småvärdestransaktioner arrin qaali ah."
"In dareen ballaadhan, waa la jecel yahay in xawaalad dheeraad ah oo elektaroonig ah sameeyay tan iyo markii uu ku Sugno processing warqad ku salaysan qaali maanta la sii yarayn karo."
Ingves hadal marka hore waa sidaas oo gebi ahaanba been ah. Waa macaamiisha oo aan bangiga, iyo ganacsiga in ugu dambeyntii qaadataa qiimaha lacagta. War saxaafadeedka ayaa lagu labaad soo horjeedda ee Riksbanken ayaa waxa loogu yeero "dhexdhexaadnimada". Taasi waa, waa baahida dadweynaha ee lacag caddaan ah in la xakameeyo badnaa. Waxa dooda Riksbanken kontantlösheten furan.
Waa run in weli laftiisa go'aamin kara in la isticmaali kartaa kaarka lacag caddaan ah ama credit. Laakiin markii dadkii si joogto ah maskaxda by bangiyada, warbaahinta, hay'adaha dawladda iyo kuwa kale si ay mudnaanta doorasho listicmaalka sida ay leedahay in dareenka nafsiga ah, laga saaro qayb weyn oo ka mid ah go'aanka. Nasiib darro, dad badan oo kaliya in ay ka fogaadaan qaylinayaan ama aad marka waa la khiyaaneeyey by-soosaarkooda faa'iidooyinka been ah. Waayo, kuwo badan oo inaga mid ah waxaa halkii waa heshaa ah in iska caabin ah. Qiimaha kaararka deynta waa faqeen in tiro aad u badan oo bangiyada iyo shirkadaha credit card. Intaa waxaa dheer, bangiyada oo kaliya iyo shirkadaha credit card isha ku saabsan waxa run ahaantii dhacaya kontantlösbrott.
qeybo badan oo ka mid ah warshadaha lacag caddaan ah taabato ah badanaa ma laha tirooyinka la taaban karo si ay u muujiyaan laakiin "ogaan" weli in maamulka uu yahay "mid aad u qaali ah". ururada kala duwan iyo dadka qadhaadh caban in "maaraynta lacagta caddaanka ah kharash idiina weyn." Sida marka la eego lacagta dhabta ah, waxa aan, macaamiisha, kuwaas oo ugu dambeyntii sidoo kale bixin maamulka lacagta caddaanka ah waa. Milkiilaha Business qaadataa ma lacag ka bixi jiray jeebka u gaar ah, tusaale ahaan, mushaharka ee u maaraysay lacag caddaan ah, Loomis. Markii hore, bangiyada ugu badan ee lacagta lacagta ganacsiga Laakiinse dhammaadkeedu waa macaamilka yaa bixinaya. Haddaba waxaan ku adkayn kuwaas oo ugu dambeyntii bixin labada lacagta iyo maareynta lacagta caddaanka ah. Sidaas awgeed waa waqtiga si ay u joojiyaan cowdo aasaaska.
In xaalado kale oo badan oo ku qoran oo keliya in lacagta ku kici doonto lacag ganacsiga. Waxa aan kala soocin kharashka bulsho oo dhab ah, kharashka ganacsiga iyo kharashka qofka. Waa aan loo aabo yeelin ay ka hadlaan mid ka mid ah saddex kharashka kala duwan taas oo ku xidhan waxa janjeero dacaayad. Waxa ay tahay in mar walba ka codsan waa kuwa ugu dambeynta bixiya. In ay taasi dhacdo macaamiisha.